Ny lahatsoratr'i Mike Jones momba ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Mike Jones
Mike Jones dia nahazo diplaoma tamin'ny anjerimanontolo Boston, manana MS amin'ny Mass Communication. Mpanoratra amin'ny fotoana feno izy izao, liana amin'ny zavatra rehetra mifandraika amin'ny orinasa sy ny haitao.
Fomba fanao 6 tsara indrindra hampitombo ny fandraisan'anjaran'ny mpanjifa
Asabotsy, Aogositra 27, 2016 Asabotsy, Aogositra 27, 2016 Mike Jones
Ny fanadihadian'ny mpanjifa dia afaka manome anao hevitra hoe iza ny mpanjifanao. Izy io dia afaka manampy anao hampifanaraka sy hanitsy ny endrik'ilay marika, ary afaka manampy anao amin'ny faminavinana momba ny zavatra tadiavin'izy ireo amin'ny ho avy. Ny fanaovana fanadihadiana matetika arak'izay azonao atao dia fomba tsara hijanonana mialoha ny fiolahana raha ny fironana sy ny safidin'ny mpanjifanao no resahina. Ny fanadihadiana dia afaka manatsara ny fahatokisan'ny mpanjifanao ary farany, ny tsy fivadihana, satria hita io